Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Jeremiah 51
Nepali New Revised Version, Jeremiah 51
1 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “हेर, बेबिलोनको विरुद्धमा र लेब-कमाइका* मानिसहरूका विरुद्धमा एउटा सर्वनाश गर्ने आत्‍मालाई म सुर्‍याउनेछु।
2 त्‍यसलाई निफन्‍न र त्‍यसको देश उजाड़ पार्नलाई बेबिलोनमा म विदेशीहरू पठाउनेछु। त्‍यसका सर्वनाशको दिनमा त्‍यसको विरोध गर्ने विदेशीहरू त्‍यसका चारैतिरबाट आउनेछन्‌।
3 धनुर्धारीले आफ्‍नो धनुमा ताँदो नचढ़ाओस्‌, र त्‍यो आफ्‍नो कवच लगाएर खड़ा नहोओस्‌। त्‍यसका जवान मानिसहरूलाई नछोड़। त्‍यसको सबै सेनालाई बिलकुलै सर्वनाश गर।
4 तिनीहरू बेबिलोनमा मारिनेछन्‌। त्‍यसका गल्‍लीहरूमा तिनीहरू मरणान्‍त घाइते हुनेछन्‌।
5 किनभने इस्राएल र यहूदा आफ्‍ना परमेश्‍वर, सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुद्वारा त्‍यागिएका छैनन्‌, यद्यपि इस्राएलका परमपवित्रको सामुन्‍ने तिनीहरूको देश दोषले भरिएको छ।
6 “बेबिलोनबाट भाग! हरेक आ-आफ्‍नो ज्‍यान जोगाउनलाई भाग। त्‍यसका पापहरूको कारण तिमीहरू नाश नहोओ। यो परमप्रभुको बदला लिने समय हो, उहाँले त्‍यसलाई त्‍यसले पाउनुपर्ने दण्‍ड दिनुहुनेछ।
7 बेबिलोन परमप्रभुको हातमा एउटा सुनको कचौरा थियो। त्‍यसले सारा संसारलाई मत्त्यायो। जाति-जातिहरूले त्‍यसको दाखमद्य पिए, र त्‍यसैकारण उनीहरू बौलाहा भए।
8 अब बेबिलोन एक्‍कासि ढल्‍नेछ र टुक्रा-टुक्रा पारिनेछ। त्‍यसको निम्‍ति विलाप गर! त्‍यसको दुखाइको निम्‍ति लेप ल्‍याओ, शायद त्‍यो निको हुन्‍छ कि!
9 “ ‘हामीहरूले बेबिलोनलाई निको पार्नेथियौं, तर त्‍यो निको हुन सक्‍दैन। त्‍यसलाई छोड़िदियौं, र हामी आ-आफ्‍नो देशमा गइहालौं। किनकि त्‍यसको इन्‍साफ आकाशसम्‍मै पुगेको छ, यो बादलसम्‍मै अग्‍लो उठेको छ’।
10 “ ‘परमप्रभुले हामीलाई निर्दोष ठहराउनुभएको छ। आऔं, हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरले के गर्नुभएको छ, त्‍यो सियोनमा प्रचार गरौं’।
11 “काँड़ तिखार! ढालहरू लेओ। परमप्रभुले मादीहरूका राजाहरूलाई सुर्‍याउनुभएको छ, किनभने बेबिलोनलाई नाश गर्नु नै उहाँको अभिप्राय छ। परमप्रभुले बदला लिनुहुनेछ, आफ्‍नो मन्‍दिरको निम्‍ति बदला।
12 बेबिलोनका पर्खालहरूका विरुद्धमा झन्‍डा उठाओ। गारदलाई बलियो पार। पहरा-चौकी खटाओ। लुकेर हमला गर्ने ठाउँ तयार पार। बेबिलोनका मानिसहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले आफ्‍नो उर्दी दिनुभएको छ, उहाँले आफ्‍नो अभिप्राय पूरा गर्नुहुनेछ।
13 तँ, जो धेरै पानी भएका ठाउँमा बस्‍छस्‌, र धन-सम्‍पत्तिका भण्‍डारले पूर्ण भएको छस्‌, तेरो खतम हुने समय आइपुग्‍यो, तेरो अन्‍त्‍य आइपुग्‍यो।
14 सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले आफ्‍नै नाउँमा शपथ खानुभएको छ, सलहसरि तिमीहरूका बीचमा म निश्‍चय नै मानिसहरू भरिदिनेछु, र उनीहरूले तिमीहरूमाथि विजयको नारा लगाउनेछन्‌।
15 “उहाँले पृथ्‍वीलाई आफ्‍नो सामर्थ्‍यले सृजनुभयो। उहाँले आफ्‍नो बुद्धिले संसारलाई स्‍थापित गर्नुभयो, आफ्‍नो समझशक्तिले उहाँले आकाशलाई फैलाउनुभयो।
16 उहाँ गर्जनुहुँदा आकाशमा पानीहरू गड्याङगुडुरुङ गर्छन्‌, उहाँले पृथ्‍वीको पल्‍लो छेउदेखि बादलहरू उठाउनुहुन्‍छ। उहाँले वृष्‍टिको साथ बिजुली चम्‍काउनुहुन्‍छ, र आफ्‍ना भण्‍डारहरूदेखि बतास चलाउनुहुन्‍छ।
17 “हरेक मानिस बुद्धिहीन र ज्ञानरहित छ। हरेक सुनार त्‍यसका मूर्तिहरूद्वारा नै लाजमा पर्छ। त्‍यसका प्रतिमाहरू झूटा छन्‌, तिनमा सास हुँदैन।
18 ती व्‍यर्थका हुन्‌, ठट्टाका पात्र मात्र। तिनीहरूको न्‍याय हुँदा ती नष्‍ट हुनेछन्‌।
19 उहाँ, जो याकूबका हिस्‍सा हुनुहुन्‍छ, यीजस्‍ता हुनुहुन्‍न, किनकि उहाँ नै आफ्‍नो निज उत्तराधिकारको कुलसमेत सारा थोकहरू बनाउने हुनुहुन्‍छ। सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु उहाँको नाउँ हो।
20 “तँ मेरो युद्धको गदा, लड़ाइँको हतियार होस्‌। तँद्वारा म जातिहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु, तँद्वारै म राज्‍यहरूलाई नाश गर्छु।
21 तँद्वारा म घोड़ा र त्‍यसको सवारलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु।
22 तँद्वारा म रथ र सारथिलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु। तँद्वारा म पुरुष र स्‍त्रीलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु। तँद्वारा म बूढ़ा र जवान दुवैलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु। तँद्वारा म युवक र युवतीलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु।
23 तँद्वारा म गोठाला र त्‍यसको बगाललाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु। तँद्वारा म किसान र त्‍यसको गोरुलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु। तँद्वारा म राज्‍यपाल र पदाधिकारीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु।
24 “तिनीहरूले सियोनमा गरेका सबै खराबीको कारण म बेबिलोन र बेबिलोनियामा बस्‍ने सबै मानिसहरूलाई तेरै आँखाको सामुन्‍ने प्रतिफल दिनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
25 “हे नाश गर्ने पहाड़, जसले सारा पृथ्‍वीलाई नाश गर्दछ, म तेरो विरुद्धमा छु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। “म मेरो हात तेरो विरुद्धमा पसार्नेछु, र तँलाई भीरबाट तल खसालिदिनेछु, र तँलाई डढ़ेलो लागेको पहाड़ तुल्‍याइदिनेछु।
26 तँबाट एउटै ढुङ्गा पनि घरको कुने-ढुङ्गाको लागि लिइनेछैन, न त जग बसाल्‍नका लागि एउटा ढुङ्गो लिइनेछ। किनकि तँ सदाको निम्‍ति उजाड़ भइरहनेछस्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
27 “देशमा एउटा झन्‍डा खड़ा गर! जाति-जातिहरूका बीचमा तुरही बजाओ! त्‍यसको विरुद्धमा युद्ध गर्नलाई जातिहरूलाई तयार गर। यी राज्‍यहरूलाई बेबिलोनको विरुद्धमा बोलाओ– आरारात, मिन्‍नी र अशकनज। त्‍यसको विरुद्धमा एउटा सेनापति नियुक्त गर, सलहहरूका झुण्‍डझैँ घोड़ाहरू पठाओ।
28 त्‍यसको विरुद्धमा युद्ध गर्नलाई जातिहरूलाई तयार पार– मादीहरूका राजा, उनका राज्‍यपाल र उनका सबै पदाधिकारीहरूलाई, र उनीहरूले शासन गरेका सारा देशलाई।
29 देश थरथर काम्‍छ र मड़ारिन्‍छ, किनकि बेबिलोन देशलाई उजाड़ र कुनै मानिस नभएको बनाउनलाई परमप्रभुको अभिप्राय कायम रहन्‍छ।
30 बेबिलोनका योद्धाहरूले लड़ाइँ गर्न छोड़ेका छन्‌, तिनीहरू त आफ्‍ना किल्‍लाभित्रै बस्‍छन्‌। तिनीहरूको बल घटिहाल्‍यो। तिनीहरू स्‍त्रीझैँ भएका छन्‌। त्‍यसका बस्‍ने ठाउँहरू आगो लगाइसकिएका छन्‌। त्‍यसका ढोकामा गजबारहरू भत्‍काइएका छन्‌।
31 उसको जम्‍मै सहर लिइहाल्‍यो भनी बेबिलोनको राजालाई सुनाउन एउटा हुलाकी अर्कोकहाँ र एउटा समाचारवाहक अर्कोकहाँ दौड़ेर जान्‍छ,
32 र साथै यो खबर पनि सुनाउँछन्‌, कि जँघारहरू लिइए, सिमसारहरूमा आगो लगाइए, सिपाहीहरू डरले आत्तिए।”
33 सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “बेबिलोनकी छोरी कुल्‍चने समयमा दाइँ गर्ने खलाजस्‍तै भएकी छ। त्‍यसको कटनीको समय चाँड़ै आइपुग्‍नेछ।”
34 “बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरले हामीलाई खाइहाल्‍यो। त्‍यसले हामीलाई अलमल्‍ल पार्‍यो। हामीलाई त्‍यसले एउटा रित्तो भाँड़ाजस्‍तै तुल्‍याएको छ। त्‍यसले हामीलाई अजिङ्गरले झैँ निलिहाल्‍यो, र स्‍वादिलो थोकलाई झैँ हामीलाई निलेर आफ्‍नो पेट भर्‍यो, र त्‍यसपछि बान्‍ता गरेर हामीलाई फ्‍याँक्‍यो।
35 हामीमाथि र हाम्रा छोराछोरीहरूमाथि गरेको उपद्रव बेबिलोनमाथि नै परोस्‌,” सियोनका बासिन्‍दाहरूले भन्‍छन्‌। “हाम्रो रगतको बदला बेबिलोनीहरूमाथि नै परोस्‌,” यरूशलेमले यसो भन्‍छ।
36 यसकारण परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “हेर्‌, म तेरो पक्ष लिनेछु, तेरो निम्‍ति बदला म नै लिनेछु। म त्‍यसको समुद्र सुकाइदिनेछु, त्‍यसको पानीका मूलहरू सुकाइदिनेछु।
37 बेबिलोनचाहिँ भग्‍नावशेषको ढेर र स्‍यालहरूको अखड़ा, कोही मानिस नबस्‍ने ठाउँ, र त्रास र गिल्‍लाको पात्र हुनेछ।
38 त्‍यसका सबै मानिसहरू सिंहझैँ गर्जन्‍छन्‌। तिनीहरू जवान सिंहझैँ कराउँछन्‌।
39 तर जब तिनीहरू बिउँझन्‍छन्‌, तब म तिनीहरूका निम्‍ति भोज तयार पार्नेछु, र म तिनीहरूलाई मत्त्याउनेछु, र यसरी तिनीहरू हाँस्‍दै कराउनेछन्‌ र सधैँको निम्‍ति सुत्‍नेछन्‌ र जाग्‍नेछैनन्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
40 “म तिनीहरूलाई काटिनलाई लगिने थुमा, भेड़ा र बोकाहरूझैँ ल्‍याउनेछु।
41 “सारा पृथ्‍वीको अहङ्कार, बेबिलोन कसरी लिइनेछ! जाति-जातिहरूका बीचमा बेबिलोन अति घृणित हुनेछ!
42 समुद्र नै बेबिलोनमाथि उक्‍लेर आउनेछ, समुद्रका गर्जने छालहरूले त्‍यसलाई छोप्‍नेछन्‌।
43 त्‍यसका नगरहरू सुक्‍खा ठाउँ, मरुभूमि, कोही पनि नबस्‍ने जग्‍गा हुनेछ। त्‍यताबाट भएर कोही मानिस जानेछैन।
44 म बेबिलोनमा बेललाई दण्‍ड दिनेछु, र त्‍यसले निलेका कुरा म त्‍यसलाई नै मुखबाट बान्‍ता गर्न लाउनेछु। जातिहरू फेरि कहिल्‍यै त्‍यसकहाँ ओइरिनेछैनन्‌, र बेबिलोनको पर्खाल ढल्‍नेछ।
45 “हे मेरा प्रजा, त्‍यसबाट निस्‍केर आओ। हरेक आ-आफ्‍नो ज्‍यान जोगाउनलाई भाग। परमप्रभुको भयानक रीसदेखि भाग।
46 देशमा केही हल्‍ला सुन्‍दा हतोत्‍साहित नहोओ अथवा नडराओ। यस वर्षमा एक किसिमको होहल्‍ला, अनि अर्को वर्षमा अर्को किसिमको होहल्‍ला, देशमा उपद्रव र शासकको विरुद्धमा शासक उठेको होहल्‍ला।
47 किनकि यस्‍तो बेला निश्‍चय नै आउँछ, जब म बेबिलोनका मूर्तिहरूलाई दण्‍ड दिनेछु। त्‍यसको सारा देश लाजमा पारिनेछ, र त्‍यसका मारिएका सबै त्‍यसकै बीचमा मारिनेछन्‌।
48 तब स्‍वर्ग र पृथ्‍वी र तिनमा भएका सबैले बेबिलोनको हारमा आनन्‍दले चिच्‍च्‍याउनेछन्‌, किनकि सर्वनाश गर्नेहरू उत्तर दिशाबाट त्‍यसको विरुद्धमा आउनेछन्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
49 “बेबिलोनको कारणले पृथ्‍वीमा मारिएकाहरू ढलेझैँ इस्राएलका मारिएकाहरूको कारण बेबिलोन ढल्‍नैपर्छ।
50 तिमीहरू, जो तरवारबाट उम्‍केका छौ, जाओ र नअड़िओ। टाढ़ाको देशमा परमप्रभुलाई सम्‍झना गर, यरूशलेमको बारेमा विचार गर।”
51 “हामीहरू लाजमा पारिएका छौं, किनकि हामीले गाली पाएका छौं। लाजले हाम्रो मुख ढाकेको छ, किनभने परमप्रभुको घरका पवित्र ठाउँहरूमा विदेशीहरू प्रवेश गरेका छन्‌।”
52 “तर यस्‍ता दिनहरू आउँदैछन्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “जब म त्‍यसका मूर्तिहरूलाई दण्‍ड दिनेछु, र त्‍यसको देशभरि नै घाइतेहरूको क्रन्‍दन सुनिनेछ।
53 उँभो स्‍वर्गसम्‍म बेबिलोन उक्‍ले तापनि र आफ्‍नो अल्‍गा-अल्‍गा गढ़ीहरू बलिया पारे तापनि, त्‍यसको विरुद्धमा सर्वनाश गर्नेहरू म पठाउनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
54 “बेबिलोनबाट विलापको आवाज निस्‍किन्‍छ! बेबिलोनीहरूको देशबाट रुवाइको सोर निस्‍कन्‍छ, ठूलो सर्वनाशको आवाज!
55 परमप्रभुले बेबिलोनलाई सर्वनाश गर्नुहुनेछ, र त्‍यसको ठूलो हल्‍लालाई उहाँले दमन गर्नुहुनेछ। त्‍यसका शत्रुहरूका छालहरू समुद्रका ठूला-ठूला पानीझैँ गर्जनेछन्‌। उनीहरूका गर्जनको प्रतिध्‍वनि हुनेछ।
56 सर्वनाश गर्ने बेबिलोनको विरुद्धमा आउनेछ, त्‍यसका योद्धाहरू पक्राउ पर्नेछन्‌, र तिनीहरूका धनु टुक्रा-टुक्रा पारिनेछन्‌, किनकि परमप्रभु बदला लिने परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ। उहाँले पूरै प्रतिफल दिनुहुनेछ।
57 म त्‍यसका पदाधिकारीहरू र बुद्धिमान्‌ मानिसहरूलाई, त्‍यसका राज्‍यपाल र अधिकृतहरूलाई र योद्धाहरूलाई पनि मतवाला बनाउनेछु। तिनीहरू सदाको निम्‍ति निदाउनेछन्‌, र बिउँझनेछैनन्‌,” महाराजा, जसको नाउँ सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु हो, उहाँ भन्‍नुहुन्‍छ।
58 सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “बेबिलोनको चौड़ा पर्खाल सम्‍म पारिनेछ, र त्‍यसका अल्‍गा मूल ढोकाहरू आगोले जलाइनेछन्‌। मानिसहरू व्‍यर्थमा आफूलाई थकित तुल्‍याउँछन्‌। जातिजातिका परिश्रम ज्‍वालाको निम्‍ति इन्‍धन मात्र हुन्‍छन्‌।”
59 महसेयाहका नाति, नेरियाहका छोरा सरायाह जो राजभवनका मुख्‍य अधिकृत थिए, जो यहूदाका राजा सिदकियाहका राजकालको चौथो वर्षमा राजासँगै बेबिलोनमा गएका थिए, त्‍यस बेला तिनलाई यर्मियाले दिएको सन्‍देश यही हो।
60 बेबिलोनमा आइपर्ने सबै सर्वनाशको विषयका कुरा यर्मियाले एउटा पत्रको मुट्ठोमा लेखेका थिए– बेबिलोनको बारेमा लेखिएका सबै कुरा।
61 तिनले सरायाहलाई भने, “जब तिमी बेबिलोनमा पुग्‍छौ तब यी सबै कुरा तिमीले चर्को गरी पढ्‌नू,
62 र भन्‍नू, ‘हे परमप्रभु, तपाईंले यस ठाउँलाई सर्वनाश गर्छु भनी भन्‍नुभएको छ, यतिसम्‍म कि मानिस वा पशु कोही पनि यसमा वास गर्नेछैन। यो सदाको निम्‍ति उजाड़ पारिनेछ’।
63 यो पत्रको मुट्ठो पढ़िसकेपछि यसलाई एउटा ढुङ्गामा बाँधेर यूफ्रेटिस नदीमा फालिदेऊ।
64 तब यसो भन, ‘मैले त्‍यसमाथि ल्‍याउने सर्वनाशको कारण बेबिलोन यसरी नै फेरि कहिल्‍यै नउठ्‌ने गरी डुब्‍नेछ। र त्‍यसका मानिसहरू लोट्‌नेछन्‌’।” यर्मियाका वचनहरू यहीं सकिन्‍छ।
Jeremiah 50 Choose Book & Chapter Jeremiah 52